विश्व विजेता गोलरक्षक इकर कासिलास हृदयघात भएपछि अस्पताल भर्ना, अवस्था कस्तो छ ? – osnepal tv
विश्व विजेता गोलरक्षक इकर कासिलास हृदयघात भएपछि अस्पताल भर्ना, अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं । स्पेनका विश्वकप विजेता गोल रक्षक इकर कासिलासलाई हृदयघात भएको छ । अभ्यासको क्रममा हृदयघात भएपछि उपचाररत कासिलासको अवस्था स्थिर रहेको जनाइएको छ । कासिलासले समाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी दिँदै अवस्था नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरेका हुन् । पोर्चुगिज क्लब पोर्टोमा रहेका कासिलासलाई अभ्यासको क्रममा हृदयघात भएको थियो ।
३७ वर्षका कासिलासको अवस्था स्थिर रहेको छ र उनी अस्पतलामा डाक्टरको निगरानीमा छन् । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षकका रुपमा सदैब सम्झना गरिने कासिलासले आफूले निकै ठूलो भयको सामना गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर आत्मबल भने उस्तै रहेको उनले बताएका छन् ।
उनलाई बुधबार बिहान हृदयघात भएको हो । कासिलास पोर्टोको सियुएफ अस्पतालमा रहेको र उनको अवस्था स्थिर रहेको तथा मुटुमा देखिएको समस्या समाधान भएको पोर्टोले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । रियल मड्रिडमा १६ वर्षको करिअरमा उनले ७२५ खेल खेलेका थिए । त्यसक्रममा उनले तीन पटक च्याम्पियन्स लिग तथा पाँच पटक ला लिगाको उपाधि जिते ।
यस्तै उनी लगातार दुई पटक सन् २००८ र २०१२ मा युरोकप जित्ने तथा सन् २०१० मा विश्वकप जित्ने स्पेनिस टिममा पनि थिए । रियल मड्रिडले आफ्ना पूर्व गोलरक्षकको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
Previous article नेपाली चिनीले विदेशबाट आयात भएको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा करोडौँ मूल्य बराबरको चिनी गोदाममा थन्कियो
Next article इतिहास भनेको सम्पत्ति हो, हामी सबै मिलेर मकवानपुरगढीको संरक्षण गर्नुपर्छ
नेपाली चिनीले विदेशबाट आयात भएको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा करोडौँ मूल्य बराबरको चिनी गोदाममा थन्कियो
इतिहास भनेको सम्पत्ति हो, हामी सबै मिलेर मकवानपुरगढीको संरक्षण गर्नुपर्छ